आखिर किन भयाे यस्ताे ? रवीलाई भोट गर्दा अमीतको नाम ! - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर २१ गते १७:०६
काठमाडाैं, २१ मंसिर । अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी शो नेपाल आइडलमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अाएका एक्ला प्रतिस्पर्धी रवी वडलाई भोट गर्दा अमीत बरालको नाम आएपछि रवीका समर्थकहरु अाक्राेशित बनेका छन् ।
रवीलाई मोवाइलको म्यासेज बक्समा गएर १० टाइप गर्दै ३१००९ मा भोट गर्दा अमीत बराललाई भोट गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्दै जवाफ आउन थालेपछि रवीका समर्थक अाक्राेशित भएका हुन्। जबकी बरालकाे भाेटिङ् काेड ०१ हाे ।
अधिकांश समथर्कले रवीलाई गरेको भोट आइडलमा बाँकी रहेका प्रतिस्पर्धी अमीत बराललाई गएको देखाएको छ । रबीका समर्थक गौतम कुँवरले यसको सत्यतथ्य छाननि हुनुपर्ने माग गरे । रवीलाई आइडलबाट विदा गर्ने षडयन्त्रका साथ यसो गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
यसअघि सर्वाधिक भोट ल्याउँदै टप ५ सम्म पुगेका रबीलाई हटाउन केही चलखेल भएको हुनसक्ने समर्थकहरुको आशंका छ । रबीलाई आफूले भोट गर्दा अमीतलाई गएको भन्दै समर्थक निर्मला भट्टले आक्रोश पोखिन् ।
रवीलाई गरेको भोट अमीतलाई जाने मात्र होइन भोटिङ समय शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म भएपनि बिहान १० बजेपछि भोट गर्न नमिल्ने समेत भएको थियो । बिहीबारको प्रस्तुतिको आधारमा प्रतिस्पर्धीले भोट पाउने छन् । र, कम भोट पाएको प्रतिस्पर्धी आइडलको मञ्चबाट शुक्रबार विदा हुने छ ।
रविलाई भोट गर्दा अमितको नाम आएको भन्दै रेकर्डीङ स्टुडीयो बाहिर रविका समर्थकहरुले नारावाजी समेत गरेका छन्। आइडलका निर्देशक सुरेश पौडेलले भने नाम अमीतको आए पनि भोट रवीलाई नै जाने बताए । उनले बिहान केहि प्राविधिक समस्या आएकाले त्यस्तो भएको उनले बताए । केहीबेरपछि सुधार गरिएकाे निर्देशक पाैडेलले बताए ।